Chile Vs Germany, Alexis Sanchez Vs Juan Draxler, Bravo Vs Ter Stegen- Waqti Iyo Goobta Lagu Ciyaari Doono Finalka Confederations Cupka. – WWW.Gool24.net
Chile Vs Germany, Alexis Sanchez Vs Juan Draxler, Bravo Vs Ter Stegen- Waqti Iyo Goobta Lagu Ciyaari Doono Finalka Confederations Cupka.
Xulalka qaramada Chile iyo Germany ayaa iskugu soo baxay finalka koobka qaaradaha aduunka ee FIFA Confederations Cupka waxayna labadan xul qaran horeba iskugu soo arkeen kulamadii Group B balse markale waxay iskaga hor iman doonaan kulanka ugu muhiimsan ee koobkan loogu kala guulaysan karo.
Xulka qaranka Chile ayaa finalka FIFA Confederations Cupka soo gaadhay kadib markii ay 120 daqiiqo la soo ciyaareen Portugal laakiin goolhaye Claudio Bravo ayaa noqday geesiga xulka qarankiisa kadib markii uu badbaadiyay saddexdii rekoodhe ee Portugal tuurteen ee ugu horeeyay halka saddexdii ciyaartoy Chile u tuuray ay wada dhaliyeen taas oo keentay in afartii rekoodhe ee hadhay aanu midkoodna tuuran.
Laakiin xulka qaranka Germany ayaa soo xasuuqay xulka qaranka koobkan hore ugu soo guulaystay ee Mexico waxayna Germany 4:1 ugu soo baxeen finalka Confederations Cupka si ay taariikh iyo balan uga samaystaan xulka qaranka Chile.
Kulanka Chile iyo Germany ayaa noqon doona kulan xiiso badan waxaana si wayn isha loogu hayn doonaa Alexis Sanchez oo ka hor iman doona xidiga Germany waqti xaadirkan ugu muhiimsan ee Juan Draxler halka labadii goolhaye ee Barcelona ka soo wada ciyaaray ee Claudio Bravo iyo Ter Stegen ay noqon doonaan kuwa sida gaarka ah loo eegi doono.
Xulka qaranka koobka qaramada koonfur America ku soo guulaystay ee Chile ayaa sanadihii ugu danbeeyay sameeyay taariikh layaableh waxayna laba jeer oo xidhiidh ah kus oo guulaysteen Copa America waxayna Russia la yimaadeen hubkooda ugu culus.
Laakiin xulka qaranka koobka aduunka haysta ee Germany ayaa Russia kala soo xaadiray koox gabi ahaanba cusub waxaana fasax in ay galaan loo ogolaaday dhamaan xidigaha uu Germany koobka aduunka u diyaarsaday. Waxaa ka mid ah xidigaha Germany ka maqan Manuel Neuer, Mats Hummels, Boateng, Toni Kroos, Mesut Ozil, Thomas Muller, Mustafi iyo dhamaan xidighii muhiimka ahaa balse wali waxay dhigayaan wacaro cajiib ah.
XOGTA KULANKA FINALKA CONFEDRATIONS CUPKA:
Kulanka finalka FIFA Confederations Cupka ayaa ka dhigi doona garoonka Stadion Krestovskyi kaas oo ku yaal Saint Petersburg waxaana kulanka finalka ay Chile iyo Germany wada ciyaari doonaan axada July 2,2017 waxayna ciyaartu bilaabi doontaa 9:00 habeenimo ee saacada geeska Afrika, markaas oo la ogaan doono haddi Chile ama Germany uu koobkan ku guulaysan doono.
Waxaa jiri doonta xaflad wayn oo loo qaban doono Finalka FIFA Confederations Cup 2017 iyada oo waliba Russia ay soo bandhigi doonto qaabka fiican ee ay diyaarka ugu tahay marti galinta koobka aduunka ee sanadka soo socda. Intii ay socdeen kulamadii FIFA Confederations Cup 2017 ayay Russia muujisay in ay diyaar u tahay marti galinta koobka aduunka Russia 2018.
Si kastaba ha ahatee, Germany iyo Chile midkii ku guulaysta koobkan FIFA Confederations Cupka waxay u noqon doontaa markiisii ugu horeeyay maadaama oo aanu labadan xul qaran midkoodna hore ugu soo guulaysan koobka ay finalkiisa soo gaadheen.